Askari Kenyaan Ah Oo Arin Halis Naftiisa Ku Ah Kala Kulmay Soomaliya -News and information about Somalia
Home Warkii Askari Kenyaan Ah Oo Arin Halis Naftiisa Ku Ah Kala Kulmay Soomaliya
Askari Kenyaan Ah Oo Arin Halis Naftiisa Ku Ah Kala Kulmay Soomaliya
hellada Askari 30 jir ah oo ka tirsanaa Ciidanka Difaaca Kenya islamarkaana ku waashay dagaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ay caddaalad dalbanayaan
Qoyska Askariga ayaa sheegay in Ciidanka Kenya saraakiisha ugu sarreysa ay dayaceen wiilkooda islamarkaana uu jidadka Nairobi bacaha ka ururiyo hadda.
John Njoroge, oo 30 jir ah ayaa waxaa uu Shahaaddada A- ka keenay imtixaanaadka dugsiga sare ee Kenya sanadkii 2014kii,waxaana uu ku biiray Milatariga Kenya kaddib tababar ciidan oo uu qaatay.
Sanadkii 2016kii ayaa waxaa uu ka mid noqday Ciidamada Kenya ee loo qaaday Soomaaliya,waxaana uu ka mid noqday Askartii ka badbaadday weerarkii Kulbiyow oo lagu dilay 68 Askari oo saaxiibadii ahaa sida ay sheegtay dowladda Kenya.
Askarigan ayaa isaga oo maskaxiyan wareeray waxaa dib loogu celiyay qoyskiisa,waxaana dhowr jeer loo sheegay in uu nasiino u baahanyahay.
Markii uu ku laabtay Gurigiisa ayuu jejebiyay 12 Dhalo, alaabo kale oo Guriga yaallay,waxaa uu sidoo kale dil ugu hanjabay xaaskiisa oo hal cunug u heysa, hayeeshee isaga carartay.
Waxaa ay Qoysku geeyeen saldhig Boolis si halkaas loogu daryeelo, waxaana markii dambe la sheegay in uu caafimaaday hayeeshee waxaa lagu arkay isaga oo hal kab wata magaalada Nairobina bacaha ka ururinaya.
Qof yaqaannay ayaa la wadaagay Qoyskiisa in wiilkooda oo Bacaha ka ururiyo waddooyinka Nairobi,halkaas markii ay ka soo wateen ayey geeyeen xarun Militariga Kenya leeyahay,waxaana ay weydiiyeen xuquuqdiisii iyo daryeelkiisii halka uu ku maqanyahay.
Hooyada dhashay Askarigaas oo lagu magacaabo Joyce Wangari, ayaa sheegtay in noloshooda ay ku tiirsaneyd wiilkaas hayeeshee hadda aysan waxba heysan.
Waxaa ay caddaalad weydiisatay Dowladda Kenya oo ay sheegtay in wiilkeeda ay geeyeen Soomaaliya halkaas oo uu ka soo qaaday Xanuunka Dhimirka kaddib markii uu ka badbaaday dagaal ay ku dhinteen inta badan saaxiibadiis.
Previous articleMadaxweynaha Turkiga oo jawaab yaab leh ka bixiyey weerarkii xarumaha Shidaalka Sacuudiga [Yaa bilaabay duqeynta?]
Next articleSAWIRRO: Wasiir Ka Tirsan Dowladda Somalia Oo Ku Biiray Shirka Maalgashiga Puntland
Diyaaradii ugu horeysay oo ka digtay Garoonka Kismaayo ka dib xayiraadii...